Ireo hazakazaka soavaly 6 malaza indrindra eto an-tany | Soavaly Noti
Hazakazaka soavaly miavaka indrindra eto an-tany
Monica sanchez | | Fifaninanana soavaly
Anisan'ireo mankafy mijery soavaly mihazakazaka ve ianao? Avy eo ianao dia mety ho iray amin'ireo manafitaka, mankafy toy ny ankizy kely misy vatomamy, mijery ny hazakazaka Equine. Ary io, ny fatorana misy eo amin'ny biby sy ny mpitaingina azy, ny hafainganam-pandehan'izy ireo… dia zavatra iray izay mahatonga anao hahatsapa ho tena tsara.
Noho izany, raha te hahalala ianao hoe iza no hazakazaka soavaly miavaka indrindra eto an-tany, Amin'ity lahatsoratra ity aho dia hiresaka momba ireo izay tsy azonao adino amin'ny toe-javatra rehetra.
1 Oviana izy ireo no nanomboka nisy?
2 Inona no zava-dehibe indrindra?
2.1 Ny Kentucky Derby
2.2 The Prix de L'Arc de Triomphe
2.3 The Breeders Cup Classic
2.4 Ny fiadiana ny amboara Japon
2.6 Grand Prix any Madrid
Oviana izy ireo no nanomboka nisy?
Fifaninanana soavaly, araka ny ahalalantsika azy ankehitriny, nanomboka nanjary fizahan-tany ampahibemaso izy ireo tany Gresy fahizay, 2000 taona lasa izay. Noho ny fahalianana naterak'izy ireo, tonga dia tonga tao amin'ny Lalao Olaimpika izy ireo. Nanomboka teo dia nanomboka nanintona olona maro ireo biby ireo te hanana azy ireo ho biby fifaninanana, na ho namana ... na izy roa.
Inona no zava-dehibe indrindra?
Ny Kentucky Derby
Ny hazakaza-tsoavaly soavaly tsara indrindra. Atao isan-taona amin'ny sabotsy voalohany amin'ny Mey, ao Churchill Downs, Louisville, Kentucky. Ny fanontana voalohany dia tamin'ny 1875. Mandraka androany, dia mitarika ny Crown Triple amin'ny hazakaza-tsoavaly maloto any Etazonia izy io.
Ny biby dia mihazakazaka 1,25 kilaometatra (2,01km), ary ny mpandresy dia mitentina 2 tapitrisa dolara, vola tsy azo iadian-kevitra, mazava ho azy.
Io no hetsika hazakazaka lehibe indrindra any Eropa. Natao tamin'ny Alahady voalohany tamin'ny Oktobra tao amin'ny hazakazakazaka lava-boay any Longchamp, any Paris, France. Ny fanontana voalohany dia tamin'ny 1920, ary ny soavaly telo taona no ho miakatra no mifaninana.
Ny biby dia mihazakazaka 1,5 kilometatra, ary ny mpandresy dia mahazo 2,41 tapitrisa $, vola iray tapitrisa dolara indray mandeha. Misaotra ny Qatar Racing sy ny Equestrian Club izay naka ny tohanana, azo nitombo izany isa izany.
Na dia efa nitazona hatramin'ny 1984 aza izy io no manan-karena indrindra any Etazonia. Natao tamin'ny faran'ny volana oktobra na tamin'ny voalohan'ny volana novambra, isan-taona amin'ny hazakazaka hafa.
Mandeha 1,25 kilaometatra (2,01km) ireo biby, ary mitentina 5 tapitrisa dolara ny mpandresy.
Ny fiadiana ny amboara Japon
Izy io no hazakazaka soavaly lehibe indrindra eto Japon. Natao ny herinandro farany tamin'ny volana novambra tany amin'ny hazakazakazakazaoro Fuchu (Tokyo) nanomboka tamin'ny 1981.
Mandeha 1,49km (2,39km) ny biby, ary 4,6 tapitrisa dolara eo ho eo ny mpandresy.
Izy io koa dia heverina ho iray amin'ireo hazakazaka soavaly manan-danja indrindra. Ankalazaina amin'ny faran'ny herinandro voalohany amin'ny volana jona isan-taona ao amin'ny Epsom Downs, Surrey, Angletera, nanomboka tamin'ny 1779. Izy dia ao amin'ny Crown Triple Crown amin'ny teny anglisy, miaraka amin'ireo tsatòka 2000 Guineas sy ny St Leger Stakes.
Mandeha 1,50 kilometatra ny biby.
Grand Prix any Madrid
Izy io no hazakazaka lehibe indrindra any Espaina. Ankalazaina ny alahady voalohan'ny volana jolay ao amin'ny Hipódromo de la Zarzuela, any Madrid, nanomboka tamin'ny 1919. Afaka mandray anjara ireo soavaly sy vainga telo taona na mihoatra.
Mandeha 1,55 kilometatra ny biby.
Raha manana fotoana aleha amin'ny iray ianao, dia azo antoka fa hanana fotoana mahafinaritra 😉.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » fitsipika » Fifaninanana soavaly » Hazakazaka soavaly miavaka indrindra eto an-tany
Mitaingina soavaly any Espana
Ahoana ny fomba hisafidianana lasely